Taylor Lautner sy Billy Lourdes dia tsy miaraka intsony
Kintana Star News
Ny fon'i Taylor Lautner, izay niseho tao amin'ny "Twilight", ilay hira mahafinaritra ho an'ny tanora mpankafy azy, dia afaka maimaim-poana indray! Nisaraka tamin'ny mpiara-miasa taminy tamin'ilay andian-tantara "Queen of Scream" avy amin'ny zanakavavin'i Carrie Fisher, Billy Lourdes, ilay haino aman-jery vahiny nitantara ny firaisana ara-nofo.
Fanamafisana ny fisainana
Loharano iray akaikin'i Taylor Lautner, 25 taona ary Billy Lourd, 24 taona, dia nilaza fa ireo mpilalao sarimihetsika izay naharitra valo volana dia tsy mpivady intsony. Ny antony mahatonga ny fifandraisana dia tsy noho ny famadihana, fa noho ny tsy fifankahazoan-kevitra nifanandritry ny mpanaraka noho ny asa fitomboan'i Lourdes.
Billy Lourdes sy Taylor Lautner
Naniry ny hisintaka i Taylor, ary i Billy, nahatsapa ny fanandramana laza ary nankasitraka ny hoavin'ireo tetikasa vaovao izay, toy ny tandroka feno, nanosika azy taorian'ny nahafatesan'ilay reniny sy renibeny malaza, dia tsy nifantoka tamin'ny fifandraisan'izy ireo fa tamin'ny asany.
Nipoitra tamin'ny faran'ny May ny tsaho momba ny saka mainty hoditra mihazakazaka. Tsy niara-niasa izy ireo taorian'ny nitsidihany ny fampisehoana an'i Britney Spears, dia nijanona tsy namoaka sary mivantana tao amin'ny tambajotra sosialy izy ireo, ary nanapa-kevitra i Lourdes fa hanadio ny tantarany amin'ny Instagram, hanala ny ankamaroan'ny sary avy amin'i Lautner ao amin'ny pejiny.
Ny androany ilay mpilalao dia nahafinaritra niaraka tamin'ireo namany tao Malibu ary tsy niaraka taminy ny sipany.
Taylor sy ireo namany tany Malibu
Tao amin'ny vatan'i Carrie Fisher no nahita tratry ny zava-mahadomelina
Carrie Fisher dia naminavina ny fahafatesany
Taylor Lautner dia nankalaza ny faha-25 taonany niaraka tamin'ny zanaka vavy Carrie Fisher
Ary amin'ny alahelo, amin'ny fifaliana ...
Ny faran'ny 2016 dia "mainty" i Billy. Ny iray hafa dia nandeha tany amin'ny tontolo hafa ny reniny Carrie Fisher sy ny renibe Debbie Reynolds. Tao anatin'ireo andro mahatsiravina ireo, teo akaikin'i Taylor i Taylor, izay nanohana mafy ilay tovovavy, nanazava fa tsy nitoetra irery izy ary nitohy ny fiainany.
Taylor Lautner sy Billy Lourdes
Billy Lourdes miaraka amin'i Dadat Todd, Debbie Reynolds ary Carrie Fisher
Toe tsy mahazatra an'i David Bowie
Shakira, niaraka tamin'ny zanany lahy 8 volana, dia nandray anjara tamin'ny hetsika sosialy
Ny endrika tsy mahomby dia nahitana an'i Catherine Zeta-Jones, 48 ​​taona
Rumer Willis dia manohitra ny fampiasana Photoshop!
Biographie an'i Till Lindemann
Justin Bieber sy Haley Baldwin
Navoakan'i Freddie Mercury teo aloha ny sary tsy fantany niaraka tamin'ny sipa Jim Hutton
Nanambara ny Mompera Paris Hilton Jennifer Aniston ilay vohoka
Kate Middleton sy Prince William any Canada: Andro telo
Ann Ann Ann Ann Hathaway dia tsy mahatsiaro ao amin'ny gym
Neil Patrick Harris nirehitra tao Miami tamin'ny alàlan'ny Oscar-2016
Benedict Cumberbatch sy Sophie Hunter no ray aman-dreny fanindroany
Chris sy Liam Hemsworth
Ny zaza fahatelo Kim Kardashian sy Kanye West dia teraka tamin'ny volana Janoary ho avy
Parsley - tsara sy ratsy ho an'ny fahasalamana
Vitamina K - inona no atao?
Alflutop - injections
Fitsaboana aretina mampihorohoro
Raha tokony "Grammy" Justin Bieber dia nandeha nivory niaraka tamin'ny namany
Abbadon - iray amin'ireo zavaboary matanjaka ao amin'ny helo
Manana akanjo fotsy ilay zaza
Lalao momba ny tontolo iainana ho an'ny ankizy any an-tsekoly
Tafiditra ao amin'ny efitranon'ny ankizy ho an'ny zazavavy - hevitra sy endri-javatra mifantoka amin'ny fisafidianana ao anatiny
Mofomamy avy amin'ny ronono
Fiaraha-miasa amin'ny fifandraisana
Ny aretina amin'ny loko
Hazo mpanamboatra ny tranony
Ny alika tsara indrindra eran'izao tontolo izao
Musat amin'ny fanamafisana ny antsy
Ny mpikarakara ny fampisehoana an'i Mariah Carey dia mangataka amin'ny 3 tapitrisa dolara
Afaka ny tsy-shpu mandritra ny fitondrana vohoka?
Ahoana no hananana herim-po?
Rahoviana vao manomboka mamokatra voankazo ny plonona aorian'ny fambolena?
Enterocolitis - soritr'aretina sy fitsaboana amin'ny olon-dehibe